ဆွစ်ဇာလန်ရှိဇိမ်ခံနာရီထုတ်လုပ်သူ GC မှ၎င်း၏ပထမဆုံး Android Wear စမတ်နာရီကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် Androidsis
ဆွစ်ဇာလန်ရှိဇိမ်ခံနာရီထုတ်လုပ်သူ GC သည်၎င်း၏ပထမဆုံး Android Wear စမတ်နာရီကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
ဟိုဆေး Alfocea | | စမတ်နာရီ
စမတ်နာရီသည်အထူးသဖြင့် Android Wear 2.0 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်စမတ်နာရီများနှင့်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းများနှင့်ပိုမိုလွတ်လပ်မှုရှိစေမည့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သော operating system ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
ယခုဆွစ်ဇလန်ဇိမ်ခံနာရီထုတ်လုပ်သူအသစ်၊ GC သည် Android Wear စမတ်နာရီများထဲသို့ ၀ င်ရန်ဆန္ဒရှိသည် အချို့သူများက၎င်းသည် ၂၀၁၇ အကုန်ပိုင်းတွင်နေ့၏အလင်းကိုမြင်ရမည့်စမတ်နာရီတစ်လုံးနှင့် "ပြည့်နှက်နေသည်" ဟုယူဆပြီးဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်အရသိရသည် ထုတ်ဝေခဲ့သည် အလယ်ကိုဖြတ်ပြီး အိတ်ကပ်-Plus ကိုစမတ်နာရီ၏ GC Connect လိုင်းကိုပြုလုပ်မည့်ကိရိယာများသည် GC Structura နာရီများနှင့်ဆင်တူသည်။ စမတ်နာရီကိုချိတ်ဆက်ပါ ပွတ်သံမဏိအမှု.
အတွက်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုဇိမ်ခံစမတ်နာရီ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးအတွက်မော်ဒယ်များ နှင်းဆီရွှေနှင့်ကြေးဝါ၌တည်၏။ ထို့အပြင်ယောက်ျား၏ GC Connect ဗားရှင်းတွင် (a) ပါရှိသည် သင့်မျက်နှာပြင်ပတ်လည်အနက်ရောင်ကြွေထည်ကွင်း.
အတွင်းပိုင်း၌, နာရီပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ် Qualcomm Snapdragon Wear 210 processor0, သို့သော်သူတို့အသုံးပြုမည့် RAM နှင့်သူတို့ကမ်းလှမ်းမည့် internal storage အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မရှိသေးပါ။
လက်ရှိအချိန်တွင်လည်းမသိသေးသောအခြားလက္ခဏာတစ်ခုမှာ LG Watch Sport ကဲ့သို့မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် LTE မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များရှိမည်လား။
GC Connect ၏အထွေထွေဗားရှင်းတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည် ကွဲပြားခြားနားသောသိုင်းကြိုးမော်ဒယ်များ ၎င်းတွင် silicone အနက်ရောင်သိုင်းကြိုး၊ မိကျောင်းသားရေကြိုးနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဗားရှင်းဟာသူ့ရဲ့ကြိုးနဲ့အတူတူပါလာမှာဖြစ်ပြီးပွတ်တဲ့လက်ကောက်နှင့်အတူပါလိမ့်မယ်။
GC Connect Android Wear စမတ်နာရီများအတွက်စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုကြေငြာခြင်းမရှိသေးသော်လည်း Baselworld နာရီပြပွဲသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာယခုအပတ်တွင်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » စမတ်နာရီ » ဆွစ်ဇာလန်ရှိဇိမ်ခံနာရီထုတ်လုပ်သူ GC သည်၎င်း၏ပထမဆုံး Android Wear စမတ်နာရီကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Meizu ၏ Super mCharge နည်းပညာသည် ၁၈ မိနစ်အတွင်း ၁၀၀% အားသွင်းသည်
သင်၏ Android မှအလုပ်များကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံး application များ